१९ दिनमा तेश्रोपटक बढ्यो इन्धनको मूल्य, अबको भाउ कति ? « Salleri Khabar
१९ दिनमा तेश्रोपटक बढ्यो इन्धनको मूल्य, अबको भाउ कति ?
१८ फागुन, काठमाडाैँ । नेपाल आयल निगमले आज मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु दुईका दरले मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।